Home Wararka Fahad Yasin oo ku safrayay baasaboor Itoobiyaana oo xabsiga Jabuuti la dhigay!
Fahad Yasin oo ku safrayay baasaboor Itoobiyaana oo xabsiga Jabuuti la dhigay!
Warar kala duwan oo isqilaafsan ayaa naga soo gaarayo magaalada Jabuuti oo saakay lagu hakiyay safar uu Fahad Yasin ku doonayay in uu ku tago magaalada Muqdisho. Sida ay MOL la wadaageen Ilo lagu kalsoonan karo, Agaasimihii hore ee Haya’adda NISA ayaa xabsiga Jabuuti loo taxaabay ka dib markii uu ka soo degay diyaarad Turkish ah oo uu ka soo raacay dalka Turkiga.
Saraakiisha waaxda socdaalka dalka Jabuuti ayaa la sheegyaa in ay kala wareegtay Fahad Yasin Baasaboor Itoobiyaan ah uu ku soo safraayay. Fahad ayaa magaca uu ku safraayay waxa uu ahaa magac ka duwan kiisa iyo Baasaboor ay horay u siisay dowlada Itoobiya.
Wararka naga soo gaarayo jabuuti ayaa intaas ku daraya in Ciidanka Booliska oo ilaalinaya mas’uuliyadda ay u hayaan dalkaaas, ayaa ka hormiyimid qorshe uu Fahad Yasin ku doonayay in uu ku soo raaco diyaaradda Qatar Airways oo iyadana ku soo jeeday magaalada Muqdisho, oo iyadana laga hakiyay in ay Muqdisho timaado.
Waxaad naga sugtaa waa warar dheeraad ah.